ရသစုံပဟေဠိ(အတွဲ-၃)သီချင်းပဟေဠိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ရသစုံပဟေဠိ(အတွဲ-၃)သီချင်းပဟေဠိ	20
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Mar 25, 2015 in Creative Writing, Entertainment, Music | 20 comments
ရသစုံပဟေဠိ (အတွဲ-၃) သီချင်းပဟေဠိ
သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးတွေဖြေပေးရမယ့် အစီစဉ်လေးပါ။ Taylor Swift လေး နာမည်ကြီး သီချင်းလေးပါ။
Richard Marx ရဲ့ ယခုတိုင် နာမည်ကြီးလူကြိုက်များနေဆဲ သီချင်းလေးပါ။
Celing Dion ကြိုက်သူများ ဒက်ခနဲသိစေမယ့် သီချင်းပါ။
မိန်းကလေးတွေအသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အဖွဲ့ Westlife ရဲ့ နာမည်ကျော်သီချင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်ပါ။
လက်ရှိ ဆယ်ကျော်သက်တွေအသည်းစွဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အဖွဲ့ One Direction ကလူငယ်လေးတွေရဲ့ နာမည်ကြီးမြူးမြူးကြွကြွ သီချင်းပါ။
မြန်မာပြည်မှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့ ဂရမ်မီဆုရှင် Jason Mraz ရဲ့ နာမည်ကျော်သီချင်းပါ။
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်ကြီး Bon Jovi ငယ်စဉ်က နာမည်ကြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးတွေ ဖြေပေးရင်း။အတွဲ-၁၊၂၊၃ ရဲ့အဖြေလေးတွေ ဆက်လက်အားပေးကြပါဦး။
ခင်ဇော် says: Taylar – Love Story
Bon Jovi – U gave loveabad name
Celine – power of love
Matz – I m urs
Richard – I llbrt here waiting
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဒီခါ ဦးအောင်အပြေးလာပုံရ
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: Bad Medicine ဗျ Bon Jovi က
ခင်ဇော် says: An angel’s smile…. is what you sell….. (You gave loveabad name)
နတ်သမီးအပြုံး…. မာန်နတ်အမုန်းး…. (အတွင်းကြေ)
ခင်ဇော် says: West life – fool again
1D – ma Thi bu
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ကလေးလေးတွေကျ မတိဘူးတဲ့
naywoon ni says: ဟင့်​အင်း သိဘူး “ဂျူး” ရဲ့ “နိုဝင်​ဘာ မိုး “ထဲမှာပါမလား ပြန်​ရှာကြည့်​အူးမယ်​ ။ နိုင်​ငံခြား သချင်း မ​ပြောနဲ့ ကိုယ့်​တိုင်းပြည်​က သချင်း​တောင်​ ၂၀၀၀ ​နောက်​ပိုင်းထွက်​တာဆို သိ​တော့ဘူး ။ ရင့်​ကျက်​သွား​တော့ သီချင်းနား​ထောင်​စရာ မလို​တော့ဘူး ခ်​ခ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တူတူပဲဘနီ ခု​နောက်​ပိုင်းမြန်​မာအ​ဆော်​တို​တွေနဲ့သီချင်း​တွေမသိ​တော့ဘူး
Alinsett@Maung Thura says: Westlife ရဲ့သီချင်းပဲ သိတယ် အဟိ
အဲ့သချင်းကို အာဂေါင်နီ ပြန်ဆိုတာကို မုန်းလိုက်တာမှ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အစ်​မက Rဇာနည်​ကို အဲ့သီချင်းနဲ့ကြိုက်​သွားတာ။
တိုက်​တိုက်​ဆိုင်​ဆိုင်​ ညက အိပ်​မက်​ထဲမှာ Rဇာနည်​က ​လေဖြတ်​ပြီးဝှီးချဲကီးနဲ့တဲ့ ထူးပါ​ပေ့။
Crystalline says: ဆရာဝန်ပြတော့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: 1- Love Story
2- Right Here Waiting(I will be Rght Here Waiting for You)
4- Fool Again (အသည်းကွဲစ ထပ်နားထောင်မိပြီး ထပ်ခံစားမိတဲ့သီချင်း)
5- One Thing (ကျောင်းတက်တုန်းက နားပူအောင်နားထောင်ခဲ့ရတာ)
6- I’m Yours
7- You give loveabad name..
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မွဆွိနဲ့မောင်ဂျား နောက်ဆုံးမှဖြေလို့မရဘူးလား
တောင်ပေါ်သား says: တစ်ခုမှ မသိ ၊ ဆိုးချက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: K pop ပဲသိတယ်ပေါ့
မင်း ခန့် ကျော် says: တော်ချက်
မသိတာတွေ မေးတတ်လေခြင်းး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: နားယဉ်နေတဲ့လူတွေအတွက်က အရမ်းလွယ်လွန်းလို့ခက်နေပြီကော NT နှယ်
uncle gyi says: သီချင်းပဟေဠိဆိုလို့မြန်မာသီချင်းတွေလားလို့
Courage says: အဟင့် မျက်စိတွေလည်ပြီး ခေါင်းတွေလဲမူးပါတယ်